China Grassland Mesh orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Wire haratoantsoina koa hoe omby fefy harato na omby fencing harato, dia ampiasaina amin'ny toeram-pambolena na saha.Mampiasa akora tsara indrindra ny harato tariby, avy eo manenona amin'ny milina.Tena malaza amin'ny Euro izany.
Fitaovana: Tady vy karbônina
Kilasy A: fefy an-tsaha miaraka amin'ny fefy vita amin'ny vy vita amin'ny galvanized (mifono zinc: 220-260g / m2)
Kilasy B: fefy an-tsaha miaraka amin'ny fefy vita amin'ny vy vita amin'ny galvanized (mifono zinc: 60-70g / m2)
Kilasy C: Electro galvanised hinge joint field fefy (zinc coated: 15-20g/m2)
Toetran'ny fefy ahitra:
1 tanjaka avo vy vy randrana randrana, hery avo, hery misintona lehibe, dia afaka mahatohitra omby sy ny soavaly, ondry sy ny biby fiompy. Safe sy azo antoka ny fiantraikany mahery vaika.
2 waveform net surface mafana natsofoka tafo, harafesina sy harafesina, fiainana hatramin'ny 20 taona.
3 rafitra tsotra, fikojakojana mety, fametrahana haingana, boky kely ary lanjany maivana
Ampiasaina amin'ny fiarovana ny omby, osy, diera ary kisoa izy io.Ho an'ny fampiasana ny harena an-kibon'ny tany, manatsara ny tahan'ny fampiasana ny ahitra sy ny fahombiazan'ny fiompiana, hisorohana ny fahapotehan'ny ahitra, hiarovana ny tontolo voajanahary.Amin'izay fotoana izay ihany koa dia mihatra amin'ny fambolena sy fiompiana ny mponina mba hanorina ny toeram-pambolena fianakaviana ao amin'ny fametrahana ny sisin-tany, ny fari-tanin'ny toeram-pambolena, zana-trondro ala, fanakatonana ny havoana mba hanamorana ny fambolen-kazo, ary ny faritra fihazana, ny toeram-panorenana mitoka-monina sy ny fikojakojana.
1. Ny elanelan'ny harato dia manakana ny biby tsy hiditra amin'ny fefy.
2. Misy fikapohana soavaly nefa tsy manimba ny biby.
3. Mitoetra mitovy endrika aorian'ny fikapohana mafy ataon'ny biby.
4. Ny elanelan'ny harato dia manakana ny ondry sy osy tsy hiditra amin'ny fefy.
5. Mora ny mametraka amin'ny karazana ambonin'ny na terrain rehetra.
6. Maharitra ela.
7. Manakana ny bibidia sy ny biby mpiremby tsy hiditra ao amin'ny toeram-piompiana sy hanafika ny ondry.
8. Fatorana ondry kely sy osy mafy loha.
9. Misy fikapohana ondry sy osy nefa tsy manimba azy.
10. Ny elanelan'ny harato dia manakana ny ondry sy osy tsy hiditra amin'ny fefy.
11. Mora apetraka amin'ny karazan-tany na tany rehetra.
Type famaritana Lanja (kg) Savaivony tariby sisiny (mm) Savaivony tariby anatiny (mm)
Famaritana ny habeny Ohatra: 7/150/813/50 = tariby mitsivalana (tsipika) 7, tariby mitsangana 150mm, haavon'ny fefy 813cm, halavany 50m fpr isaky ny horonana.
teo aloha: Cage akoho